हाम्रो बारे Forest Nepal
वन पैदावारमा आधारित उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहित संरक्षण,सम्वद्र्धन र विकासका निम्ति वि.स. २०४५ सालमा वन पैदावार वितरक तथा वनजन्यउद्योग संघको तदर्थ समिति गठन गरी २०४७ साल वैशाख २१ गते यस संस्थाको विधिवतदर्ता भएको थियो । संस्थादर्ता गर्नको लागिपूर्वाञ्चल काष्ठ व्यवसायी संघ र पोखरा काष्ठ व्यवसायी संघको समेत उल्लेखनीयभुमिका रहेको थियो ।
सोही उद्धेश्य परिपूर्तिकानिम्तिवि.स. २०४९ साल कार्तिक १८ गते संघको नाम परिवर्तन गरी नेपालवनउद्योग व्यवसायी संघको नामवाट संस्थाक्रियाशिल रहँदै आएको थियो । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै अनेकनआरोह अवरोह पार गर्दै समय क्रम संगै देखा परेकावाधाव्यावधानसंग संघर्षरत रहदैं अगाडि वढिरहने क्रममा २०६४ सालभाद्र २१ र २२ गते सम्पन्नमहाधिवेशनको सम्मानित सभाले संघलाई महासंघमा रुपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको थियो र सोहीअनुरुप २०६६ वैशाख १६ गते विधिवत रुपमामहासंघमा रुपान्तरण गरिएको थियो । यस महासंघमा हालसम्म ३७ वटा जिल्ला संघ, २ वस्तुगत संघ र २ एशोसियट गरी ४० वटा संस्था सदस्य रहेका छन् ।
 नेपाल वन पैदावारमा आधारित उद्योगी व्यवसायीलाई एकताबद्ध गराई,जिल्ला तथा वस्तुगत संघहरुलाई सक्षम बनाउने ।
 वन पैदावार उद्यमी व्यवसायीहरुको तर्फबाट सम्बन्धित सरकारी निकायलाई नीति निमार्णका लागि सल्लाह,सुझाव एवं परामर्श प्रदान गर्ने
 वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य गर्ने ।
 वन पैदावारमा आधारित उद्यमी व्यवसायीहरुको हकहित एवं प्रतिष्ठा संरक्षण र सम्वद्धर्न गर्न पहल गर्ने ।
 व्यवसायिक विवाद निरुपण गर्न मध्यस्थता गर्ने ।
 यस क्षेत्रको औद्योगिक विकासको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्ने र आवश्यकता अनुसार मध्यस्तता गर्ने ।
 नर्सरी स्थापना,विरुवा उत्पादन,वृक्षारोपण, वातावरण संरक्षण गर्ने ।
 वन पैदावार उद्योग व्यवसाय प्रर्वद्धन र बिकासको लागि अद्यावधिक सूचना प्रवाह गर्ने ।
 वन पैदावार उद्यमी व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा औद्योगिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने । उपभोक्ता हितलाई मध्यनजर गर्दै सामाजीक उत्तरदायित्व सहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै राष्ट्रिय पूजीँको बिकास र मजवुत अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पु ¥याउने ।
 वन पैदावारबाट उत्पादित बस्तुको बजार प्रर्वद्धन गर्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहल गर्ने ।
 यस क्षेत्रको समग्र बिकास प्रर्वद्धन तथा दिगो व्यवस्थापन गर्दै व्यवसायीक स्थायित्वको लागि बिभिन्न गोष्ठी,सेमिनार,अध्ययन अनुसन्धान,अध्यन भ्रमण,स्थानीय तहमा सीपमुलक तालीमका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
 वन पैदावार उद्यमीहरुलाई सामाजीक तथा राष्ट्रिय दायित्वबोधको चेतना अभिबृद्धि गर्ने ।
 वन उद्यम विकास र हरित रोजगारीको श्रृजना ।
थप हाम्रो बारेमा......